Kwado Adobe Flash na Google Chrome | Akụkọ akụrụngwa
Na akụkọ kacha ọhụrụ na weebụ, aha "Otu ndị na-anataghị ikike" anụwo na oke ndapụta, ihe n'ụzọ ụfọdụ bụ nchegbu ọtụtụ mmadụ n'ihi ọrụ nke otu ndị omekome a, ọ gaara ịdabere na ọnụọgụ ole na ole nke adịghị ike na sistemụ arụmọrụ ọ bụla.
Considerfọdụ na-ewere na ngwa mgbakwunye Adobe Flash Player bụ otu n'ime ihe kpatara kpatara ụdị nsogbu a, nke bụ ihe kpatara Mozilla jiri kpebie igbochi ụdị ọrụ ọ bụla n'ime ihe nchọgharị Firefox ya. Ugbu a, ọ nwere ike ịbụ na n'otu oge ị chọrọ ngwa mgbakwunye a na Google Chrome, na-agbaso usoro ole na ole iji nwee ike mee ya naanị n'okpuru ọnọdụ gị na nkwenye dị iche iche.
Kedu otu esi eme Adobe Flash Player na Google Chrome?
Ọzọ anyị ga-edebe obere nseta ihuenyo, nke ga-abụ onye ị ga-aga. Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere nhọrọ rụọ ọrụ ebe mpaghara Google Chrome plugins (tinye-ons) ga-ajụ onye ọrụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịhapụ ọrụ ahụ nke ngwa mgbakwunye a (Adobe flash Player).
Mepee ihe nchọgharị Google Chrome gị.
Gaa n'elu aka nri (akara ngosi hamburger) wee họrọ «Mbido".
Pịgharịa gaa na ala ma họrọ bọtịnụ na-ekwu «Gosi Advanced Nhọrọ".
Ugbu a, chọta ebe nke «Nzuzo»Wee pịa« Ntọala Ọdịnaya ».
Site na windo ohuru, choo uzo nke «Emezu".
Ọ bụrụ na ịgbaso usoro nke ọ bụla mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ onwe gị n'otu ngalaba ahụ na-egosi nseta ihuenyo ahụ anyị debere na mbụ. Just ga - emechi windo ma chere ka ị hụ ihe ga - eme mgbe ụdịrị ngwa ọrụ, ngwa ntanetị ma ọ bụ weebụsaịtị kpaliri gị iji Adobe Flash Player. Site ugbu a gaa n'ihu, ọ bụ onye ọrụ ga-ahụ maka ịkwalite arụmọrụ kwuru, nke ga-adabere na mkpa ọ bụla bilitere n'oge ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu ị ga - esi gbanye Flash na Google Chrome
Ọ naghị arụ ọrụ, ana m enweta ozi iji wụnye ma mee ka Adobe dị ka ọ dị na mbụ ...
Zaghachi ka dexter6Dexter
N'ihi na ha anaghị enye azịza doro anya na m ga-achọ ịma ihe kpatara Google Chome anaghị agba ọsọ nke ọma na enwere ọtụtụ njehie na ihe na-eme ka kọmputa m jiri nwayọ nwayọ ma n'oge a Google Chome kwụsịrị ịrụ ọrụ ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị na nkwado ndị ọkachamara na-ekele gị nke ukwuu.
Zaghachi gloria suarez
M na-ede chrome: // plugins na ọ pụta na ọ nwere nkwarụ ọ naghị emepe unyi a
Mmelite Chrome kachasị ọhụrụ ewepụla ohere maka plugins, ngalaba ahụ enweghịzị ike ịnweta.
Zaghachi Ignacio Sala
Nhazi ọdịnaya ma na flash na-agbakwunye saịtị ndị ahụ jiri aka rụọ m ọrụ.
Zaghachi Jose Ibarra
Daalụ Jose, naanị tinye adreesị ma ọ rụọ ọrụ
Zaghachi Carmen Rosa Lujan Pacheco
Nnọọ. Enweela m ntọala ntọala, mana na Flash anaghị m ahụ nhọrọ ị gbakwunye ibe ọ bụla. Agbanyeghi na akara akara jụọ nke mbụ ma ọ bụ ngọngọ.
ZTE Spro2 Review: A Portable, Ike na oké ọnụ Projector